Njani ukuba buza kuba wokuqhawula umtshato - Abaqondisi-mthetho ka-Us-intanethi!
Njani ukuba buza kuba wokuqhawula umtshato
Wokuqhawula umtshato banokuthatha ezininzi iifomu
Wokuqhawula umtshato unako kuba ama-nkqubo, ingakumbi ngenxa yokuba differs ukusuka kwelinye ilizwe ukuya kwelinyeKubalulekile ukwenza yakho uphando ukuqinisekisa ukuba umgaqo-nkqubo luhambe mpuluswa kwaye ukuba uza kuba uvuma kunye yayo sikazwelonke.
Qhubeka yakho yokufunda ukuba bazise kuwe ngomhla oko kuya kufuneka xa ufuna lungisa wokuqhawula umtshato isicelo kwaye njani lawula ngokusebenzisa inkqubo yolawulo.
Uninzi amazwe kufuneka ubuncinane ixesha yokuhlala kufuneka kuba abantu abo ufuna ukufumana wokuqhawula umtshato. Ukuba uhlala kwindawo enye indawo kuba ubuncinane kwiinyanga ezintandathu, mhlawumbi unako wokuqhawula umtshato wakho kweli lizwe, nkqu ukuba iqabane lakho akazange aphile. Ukuba wena musa ukuphila ngendlela efanayo ndawo inde kakhulu, kusenokufuneka abe kuqala a okunokukhethwa kuko, ngoko ke wokuqhawula umtshato kuye xa ukhethe uzalisekisiwe iimeko ka-yokuhlala kufunwa yi-ilizwe lakho. Kwiziganeko eziliqela, kufuneka enze isicelo kweli lizwe apho uhlala khona, nkqu ukuba utshatile kwilizwe ezahlukileyo ukususela yakho ilizwe yokuhlala kuba isemthethweni izizathu. Kwezinye iimeko, iyenzeka kwi eyobuhlobo kwaye i-kulula kuqhuba, kodwa ke unako kanjalo kuba enobunzima kakhulu. Loluphi uhlobo wokuqhawula umtshato uya kukhokelela isiphumo ukuba ufuna. Phambi kwentlanganiso a lawyer kuba luhlomle kuwo, kuya kufuneka i-ithe ngqo unye into uza share phakathi iqabane lakho kunye nawe. Ukulungiselela uxwebhu kwi yakho yexabiso kunye yakho amatyala, kuquka ezi zinto zilandelayo. Isihlomelo i-ukuqeshwa angeliso experienced lawyer specializing kwi-wokuqhawula umtshato. Nkqu divorces ukuba k ubonakala ngathi elula sifana enobunzima, kwaye a lawyer specializing kwi-wokuqhawula umtshato akwazi ukuphendula imibuzo ethile, ukuba imeko yakho. Ubukhe end phezulu nto ngokwakho, luhlomle kuwo omnye ilixa kunye a lawyer ziya kukunceda ukufumana izinto zenziwa.
Khangela kuwe ngaphakathi enkundleni okanye yayo kwi-intanethi iwebhusayithi ukufumana amaxwebhu ukuba kufuneka uzalise ukuze ukuqala kwakho umtshato.
I-mlingane ukuba ahlale esihlalweni ngaphandle amaxwebhu yi"umfaki-sicelo"kwaye lomamkeli isicelo yi"defendant". Ezona ngokufanayo motif isicelo,"incompatible"kuba akukho-fault wokuqhawula umtshato.
Qiniseka ukuba emva phezulu ezimbalwa iikopi iifomu
Kwiziganeko eziliqela, kufuneka uzalise uxwebhu ukunikezela ulwazi malunga somtshato, kwaye isigwebo ukuba ukuba ubunolindela. Uza zalisa uxwebhu ukuba sichaza ebalulekileyo ulwazi malunga wokuqhawula umtshato inkqubo yakho kweli lizwe, kuquka izithintelo izakhelo malunga kwipropati yakho kwaye amatyala ngexesha nkqubo. Ukuba unayo abantwana abangaphantsi ishumi elinesibhozo leminyaka kunye iqabane lakho(e), kufuneka uzalise ifomu enxulumene custody kwaye utyelelo kunye nabantwana. Kuba imbali wokuqhawula umtshato isebenzisa smoothly, kubalulekile ukuba amaxwebhu ingaba kakuhle ukuzaliswa ilungelo ulwazi. Ukuba awufuni ukuba umsebenzi kunye a lawyer, buza isemthethweni aid kusapho inkundla okanye kwi-i-isemthethweni aid centre. Lo isemthethweni umgaqo-nkqubo yazisa iqabane lakho ukuba wokuqhawula umtshato isicelo wenziwe ezenziwe sesi sibini, kwaye inkundla ayikwazi umthetho njengoko ixesha elide njengoko namaphepha angama-abanalo. ekhutshwe Ukufumana okanye hire"middleman"ukunika akubantu ukuba iqabane lakho). Awuyi kukwazi ukuyenza kuba ufuna-nkqu kwamanye amazwe, kodwa uyakwazi cela umhlobo okanye ilungu losapho phezu ishumi elinesibhozo leminyaka ukuba yenze okanye hire a kweenkonzo umqhubi.
Ingaba uzalise i-ukwazisa info: whatsthis ka-kokuba zifunyenwe yi-courier.
Buza yakho lawyer okanye inkundla yabasebenzi ukukhangela kubalulekile wazaliswa kwi-ngokuchanekileyo.
Ukuze isicelo sakho ngu-ekusetyenzwe, xa iqabane lakho kufuneka ngamnye disclose yakho yemali ulwazi kwaye ukubhalisa nge inkundla.
Kuxhomekeka le meko, gcwalisa ingxelo ye-yaziswe yindlela elula ifomu isibhengezo umvuzo. Thetha neqabane lakho lawyer Iqabane lakho kufuneka kananjalo kufuneka zingeniswe yakhe iifomu, ngoko ke ukuba ufuna kwi-sivumelwano ngomhla ipropati kwaye amatyala ukuba uza kuba ekude. Ezi ayisayi kuba wabhala nge inkundla, ngoko ke kubalulekile ukuba wenze ubuqu egciniweyo. Ukuba kukho wenziwe notshintsho imeko yakho yemali emva kokugqiba lokuqala yaziswe amaxwebhu, kuza kufuneka uzalise yesibini ka-misela iifomu kwaye phinda inkqubo isibhengezo. Ukuba iqabane lakho yi cooperative ngexesha umgaqo-nkqubo, inyathelo elilandelayo kukuqinisekisa idrafti isivumelwano kwi ipropati, amatyala kwaye custody abantwana. Ukuba iqabane lakho alifumanisanga yaphendula ukuba isicelo sakho kuba wokuqhawula umtshato okanye yakho yaziswe ingxelo zingaphelanga iintsuku ezingamashumi amathathu, uza kugqiba yokugqibela amaxwebhu ngaphandle yokubhala sivumelwano. Gcwalisa misela zokugqibela amaxwebhu malunga kwipropati yakho kwaye amatyala, custody abantwana, alimony kunye nezinye iinkcukacha zakho imeko. Jonga ifomu yakho nge yakho lawyer okanye nge-ngumqeshwa wenkundla ukuqinisekisa ukuba bamele kakuhle wazaliswa. Emva ekubeni ukhangele yokugqibela amaxwebhu, inkundla iya kuthumela kuwe a isihlalo informing ngaba le sikazwelonke kwakho umtshato, kunye namanye amanyathelo finalize. Ukuba iqabane lakho contests wokuqhawula umtshato, uza mhlawumbi kuba ukuya a kokuva ngaphakathi enkundleni. Umgwebi uza udibane ifayile kwaye iya kuqhubeka nge utshintsho enxulumene ipropati, alimony, custody kunye neminye imiba ukuba ucinga kufuneka utshintshe.
Izindlu kunye colocation ka-iiseva wethu datacenters kwi-Senegal
Přijetí dítěte - Praxe